Semalt: Ihe Ntuzi Na-enye Aka Iji Na-egbochi Onye Ntugharị Mgbasa Ozi na Google Analytics
Nik Chaykovskiy, ọkachamara si Semalt , na-emesi ya ike na spam na-ezo aka bụ otu n'ime nsogbu ndị webmasters na-eche ihu ugbu a. Ọnọdụ ahụ na-akawanye njọ n'ime afọ, nke pụtara na onye ọ bụla na - eme ka ego buru ibu site na ịmepụta spam ntinye aka.
Spam Ghost na Referral
Spam emewo ugbu a ụzọ na akụkọ Google Analytics. Ndị Spammers na-ele anya na enweghị nsogbu na usoro ka ha wee pụta na akụkọ data nke weebụsaịtị. Ha na-eme nke a na olileanya nke na ha na-enwusi ọchịchọ ịmata ihe ruo n'ókè na webmaster na-aga na ebe nrụọrụ weebụ ha iji hụ ihe mere ha ji nọrọ na akụkọ ahụ. Nsogbu bụ na ha anaghị emewanye okporo ụzọ. Ha adịghịdị eme ya ebe ọ bụ na ha bụ bọọlụ. Ha na-eji usoro nyochaa JavaScrip nke Google Analytics mepụtara ngosi na enwere nleta. Ha na - ebute ọnụ ọgụgụ dị oke ọnụ dị ka ụtụ ọnụ na ihe ndị ọzọ ejiri nyochaa njikọ. Ọ dị oke mkpa iji gbochie spam ntụgharị ma ọ bụrụ na onye achọrọ data ziri ezi karịsịa ma ọ bụrụ na ha adabere na ya ime mkpebi ahịa.
Ọ na-esi ike igbochi spammers nke ọma ebe ọ bụ na ndị spammers na-arụ ọrụ ngwa ngwa, na-amụba ọnụ ọgụgụ nke spam hits nakwa na isi mmalite. Ọ pụtara na webmasters kwesịrị imeziwanye na mgbalị ha na-etinye na iwepu na blacklisting ndị a isi mmalite. Ọ na-esiri ndị mmadụ ike ịnweta saịtị ọhụrụ ndị na-anaghị enweta ọtụtụ ụzọ ziri ezi. Ọnụ ọgụgụ nke spam na saịtị ndị ahụ ga-ewetakwu ọkpụkpụ nke nwere ike ịbụ karịa ihe ọ bụla ọ na-enweta kwa ụbọchị.
Olee Mfe Ọ Dị?
Otu ihe ndekọ ederede dịka otu nleta. Ndị spammers na-eji koodu nchịkọta Google Analytics ma zipụ data okporo ụzọ na-eziga n'usoro akụkọ ahụ, si otú ahụ na-atụgharị nleta. Ọ nwere ike were 0.001 sekọnd iji bipụta otu ibe na sava ebe..Otú ọ dị, ha nwere ike ịmanye ihe karịrị 100 n'ime nleta ndị ahụ a na-eme na akaụntụ Google banyere ọtụtụ ebe ndị ọzọ niile. Ọ dị nnọọ mfe ịzụta otu onye ọbịa. Ogologo oge ndị spammers ji n'aka ROI, enwere nnukwu nsogbu ha nwere ike ime na ha.
Ngwọta ndị na-abịa n'elu
Ụfọdụ usoro ụfọdụ na-esikarị ike karịa na ihe ngwọta eji egbochie ntinye aka na-adịghị arụ ọrụ. Otu n'ime ha bụ ọrụ omimi dị omimi nke a na-akpọ Darodar. Ụzọ ndị a adịghị ekpochapụ ya na GA.
faịlụ .htaccess. Ọ naghị arụ ọrụ ebe ọ bụ na spam na-adịghị emetụ aka na saịtị ahụ
Ndepụta aha ndepụta. Enweghị mmelite.
Mwepu nzacha. Ọ bụ usoro ihe eji eme ihe ebe ọ bụ na ọ na-elekwasị anya na spam n'ọdịnihu ma ọ bụghị na-emegharịghachi maka ọdụ data spam gara aga.
Ntugharị Ntugharị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nso na-ewepu spam na-ezo aka na Darodar. Nanị njedebe ya bụ na ọ dịghị ndepụta ndepụta spammer na-agbanwe mgbe nile.
Ihe na-adịghị efu
Ihe ngwọta ga-eme ihe iji chọpụta na igbochi ntinye okwu na data mmuo kwesịrị ịdị ọhụrụ, si na nchekwa data buru ibu, na retroactive na ozi gara aga. Dabere na ihe atọ maka ezigbo ngwọta, ebe a bụ otu na-arụ ọrụ.
Nzọụkwụ 1: Iji ngalaba ewepu Spam
Ọ ka mma iji ngalaba ebe ọ bụ na ha adịghị agbanwe agbanwe data kpamkpam. Ọ bụrụ na onye na-enyocha ndị na-eme nchọpụta na-emeghị ihe ọ bụla mgbe ọ na-eji ihe nzacha, enweghị ụzọ isi nwetaghachi ha. Enwere ike ịkwalite data ochie site na iji ngalaba, n'agbanyeghị ogologo oge ọ dị n'ebe ahụ. Onye nwekwara ike itinye ha n'ọrụ.
Nzọụkwụ 2: Na-edebe Ndepụta Nchọta
Slack bụ ngwá ọrụ nke webmasters nwere ike iji nyochaa isi ihe ntinye aka..Ọ na-eme ka onye ọrụ ahụ mara ihe ọ bụla na-ezo aka na ya ma nye ha ọsọsọ: ma ọ bụ onye na-ede akwụkwọ ọcha ma ọ bụ onye na-ede akwụkwọ na-enyo isi okwu.
1. Slack nabatara ihe niile, na
2. Ọ na-eji PHP iji dozie nsonaazụ niile site n'usoro iji gụọ, wee debe listi ikpeazụ na webmaster iji hụ ma ọ bụrụ na ọ dị mma. Ọ bụrụ na ọ bụghị,
3. Ọ na-ebugharị spam niile a na-enyo enyo ka ọ bụrụ ọwa mmiri nke na-enye onye ọrụ a nhọrọ n'etiti onye na-agba ọsọ ma ọ bụ onye na-ede akwụkwọ. Ihe ọ bụla nhọrọ ha na - ahọrọ, ọ na - eduga na ntụ ụkwụ 4,
4. Ọ na-eduga na ibe nke gosipụtara mkpebi ahụ dị ka nkwenye nhọrọ.
5. Mgbe ahụ, Slack na-echekwa ma na-ekpuchi ndị niile na-ahụ maka spammers na nchekwa data
6. Ngosipụta ikpeazụ nke data dị ọcha ga-adị n'usoro regex. Detuo na mado ya na nchịkọta Google.
Slack na-ekwe ka ndị webmasters melite ndepụta a na-agbanyeghị ugboro ise n'ụbọchị.
Na Eziokwu, Ngwọta Dịgasị Irè Na - arụ Ọrụ:
Ọ bụ ezie na nke a bụ usoro a nwapụtara, ọ ga-arụ ọrụ ka mma ma ọ bụrụ na webmaster na-agbakwunye ya na usoro ndị ọzọ, iji jide n'aka na ha na-ekpuchi ntọala niile. Na mgbakwunye na ngwọta ahụ:
Pịa na igbe nlele nke kpaliri Google Analytics ka ewepu bots mara na spiders,
Tinye ihe "gụnyere aha nchịkọta aha,"
ntinye ntinye ajuju a kwuru n'elu bu oru oma mgbe ufodu, ma obughi ihe nghota kachasi nma n'ogologo n'ihi:
Iwepu aha njirimara abụghị onye siri ike ime, ndị spammers nchịkọta na-ejikwa ya eme ihe dị ka onye na-adịghị ike.
Ọ bụrụ na ntọala ahụ ezighị ezi, ọ nwere ike ịkwụsị nzachapụta ezigbo ndị na - ekwu okwu.